Safidy fahitalavitra tsara indrindra 2020 - Tapaho ny tadinao ary aza mandoa mihitsy - Fialam-Boly
Rehefa mieritreritra ny handefa horonantsary sy andian-dahatsoratra isika dia tsy ny Cable Tv irery no fomba handefasana azy. Manana tranokala mivantana be dia be izahay izay tsy lafo toa ny telegrama. Ankoatr'izay, ny tv cable dia misy fetrany ary tsy mamela antsika hikorisa na aiza na aiza. Noho izany, raha te hanapaka ny tadin'ny fahitalavitra tariby koa ianao ary mitady fomba hafa tsara handefasana ireo horonantsarinao, dia eo amin'ny toerana mety ianao.
Ndao ho tena izy; eto isika haneho fomba hafa hisolo azy Alefaso amin'ny Internet ny fampisehoana nataonao . Ny ampahany tsara indrindra dia ny tsy ifikiranao satria afaka miditra amin'ireo tranokala ireo ianao na aiza na aiza ary amin'ny fitaovana hafa.
Alternatives tsara indrindra amin'ny Cable TV:
Hulu no safidy mora indrindra sy tsara indrindra amin'ny tv cable. Ity tranokala ity dia ahafahanao mijery sarimihetsika, andian-tsarimihetsika Hulu tany am-boalohany, ary fandaharana amin'izao fotoana izao amin'ny $ 6 isam-bolana. Afaka mankafy an'ireto serivisy mora vidy ireto ianao, raha tsy manatsara ny kinova ara-barotra ho an'ny endri-javatra tsara kokoa.
Amin'ity kinova mora ity dia mety hahazo dokambarotra miverimberina ianao. Fa raha tsy maninona ianao amin'izany, dia tsy mila manavao ny kinova ara-barotra ho an'ny serivisy tsy misy doka ianao ary mandoa ny dolara fanampiny.
Miaraka amin'ny horonan-tsary sy seho, manolotra famandrihana mivantana amin'ny fangatahana mivantana maimaimpoana maimaimpoana amin'ny habaka maimaimpoana ihany koa ity tranonkala ity. Ankoatr'izay, afaka mankafy ny fitsapana maimaimpoana mandritra ny 30 andro ianao amin'ny vao manomboka.
Fihenan'ny mpianatra Hulu
Raha mikasika ny fananana safidy tsara kokoa amin'ny cable tv, Netflix dia fialamboly. Eto, amin'ny $ 9 ka hatramin'ny 16 isam-bolana, azonao atao ny mijery ny andianao Netflix, ny horonan-tsary ary ny fampisehoana farany. Ny fahamoran'ny fidirana natolotry ny Netflix dia tsy azo resena.
Tsy tsara izany satria azonao atao ny mandefa ny seho misy anao nefa tsy misy doka ara-barotra. Fitaovana maro amin'izao fotoana izao no efa nandefa ny fampiharana Netflix mialoha. Noho izany, ny sisa ataonao dia ny manavao ny drafitra premium mahazatra ary mankafiza ny fampisehoana anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Raiso ny fihenan'ny mpianatra Netflix
Amazon, tsy toerana fivarotana fotsiny intsony, fa izao no tranokala streaming tsara indrindra ahafahanao mijery horonan-tsary sy hankafizanao ny maha-mpikambana anao voalohany.
Eny, ny fidirana ho mpikambana voalohany ao Amazon dia manome anao fidirana amin'ny andian-tranonkala an-tserasera farany, seho, sarimihetsika, ary na dia andiany fahitalavitra aza. Miaraka amin'ny drafitra famandrihana isam-bolana $ 13, azonao atao ny mankafy ny fandefasana haingana indrindra, ny fifampiraharahana farany indrindra, ary mazava ho azy, ireo horonantsary farany koa.
Ankoatr'izay, afaka mankafy ny Fitsarana maimaimpoana Amazon Prime Video mandritra ny 30 andro alohan'ny hisafidiananao ireo serivisy. Ary tsara izany raha mankafy vanim-potoana fampisehoana tianao indrindra.
3. HBO Ankehitriny, Starz & Showtime
Manomboka amin'ny $ 15 isam-bolana, HBO Starz sy Showtime dia manolotra serivisy fandefasana horonantsary. Eto ianao dia afaka mijery ireo fampisehoana farany FBO, horonan-tsary, fanatanjahan-tena ary serivisy hafa. Ny ampahany tsara indrindra dia misy amin'ny fampiharana rehetra, ao anatin'izany ny Roku, Hulu, Amazon Prime, ary Apple Tv.
Afaka mankafy fitsapana hafitoana maimaimpoana ianao rehefa misoratra anarana amin'ny kaonty voalohany ary mankafy ny seho HBO voalohany.
Mangataha fihenam-bidy ho an'ny mpianatra HBO Ankehitriny
Mitady fomba hafa tsara kokoa ho an'ny tv cable ve ianao? Avy eo mandefasa horonantsary ao amin'ny Disney. Eny, Disney! Amin'izao fotoana izao dia afaka mandefa na inona na inona amin'ny tranokala Disney ianao amin'ny planina mora indrindra $ 7 isam-bolana. Misy dikany ny manapaka ny tadin'ny taribinao ary mifindra amin'ity safidy tsara indrindra ity amin'ny famoahana ireo seho tianao indrindra.
Avy amin'ny katalaogin'i Disney, ao anatin'izany ny Star Wars, ny jeografia nasionaly mankany Pixar, eto dia azonao daholo izay ilainao hijerena. Aza adino ny mankafy ny andiam-panadinana maimaimpoana, serivisy Hulu, ary serivisy ESPN +.
Ankoatr'izay, afaka mankafy ny fanatanjahantena ankafizinao koa ianao eto. Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ao amin'ilay tranokala, dia tsy mahazo manararaotra mandalo ny seho nataonao mihitsy ianao.
Midira ho an'ny fisedrana maimaim-poana Disney Plus
5. TV mitsoka
Ao amin'ny Sling dia tsy mila miandry ianao vao mandefa ny seho ataonao. Satria eto dia afaka mijery seho mivantana ianao. Ho fanampin'izany, afaka mankafy ireo fantsona mivantana telopolo amin'ity tranokala streaming ity ianao, ao anatin'izany ny fantsom-pahitalavitra ESPN, CNN, AMC, HGTV, ESPN2, ary Disney.
Ny ampahany tsara indrindra dia izay azonao atao amin'ity drafitra isam-bolana $ 25 ity. Raha mpankafy fanatanjahan-tena ianao, dia amin'ny fandoavana $ 5 fanampiny, dia afaka mankafy fanatanjahan-tena koa ianao. ny fitsarana fito andro maimaim-poana dia fitsaboana mamy amin'ny fonosana ho an'ireo tia horonantsary.
Mankaleo ve ianao amin'ny tsy fahitanao ny fampisehoana anao noho ny telegrama? Andao tapahana fotsiny izy ity ary andramo ity app Philo ity. Amin'ny fametrahana an'ity rindrambaiko ity dia afaka mankafy fantsona malaza indrindra 58 ianao: TLC, AMC, Nick, ary maro hafa.
Azonao atao ny mandefa an'i Philo amin'ny fitaovana telo na maromaro maimaim-poana. Noho izany, isaky ny zoma alina dia afaka mijery ny sarimihetsika tianao ianao ary mankafy ny fotoana miaraka amin'ny namana sy olon-tianao.
7. Hulu Live
Raha adala amin'ny seho Hulu ianao dia andramo mivantana ny Hulu. Hanome anao ny fidirana amin'ny seho Hulu tany am-boalohany, fanatanjahan-tena, vaovao, sarimihetsika ary andian-tranonkala ny tranokala. Ankoatr'izay, azonao atao mankafy seho mivantana ary raketo an-tsehatra ireo seho mivantana hijerenao manaraka.
Raha tsy taitra ianao dia andramo ny fitsapana maimaimpoana fito andro alohan'ny hidiranao amin'ny kinova premium. Manome toky anao izahay fa hanararaotra ny fonosana premium.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Hulu amin'ny fitaovana rehetra?
Ity misy serivisy streaming hafa tsara indrindra amin'ny endrika Apple TV +. Toa an'i Netflix sy Amazon Prime, ny Apple TV + dia mampiseho koa ny andian-tranonkala sy ny sarimihetsika farany. Ho gaga ianao raha mahafantatra fa ny orinasa teknolojia manjaka dia manolotra an'ity tranonkala streaming ity miaraka amina endri-javatra marobe amin'ny $ 5 isam-bolana.
Ambonin'izany rehetra izany, raha manana fitaovana Apple ianao, dia tsara ho anao izany satria azonao an-taonany maimaim-poana izany.
Raha te hankafy maimaim-poana ireo sarimihetsika tianao, seho ary andian-tranonkala ianao, andramo ny YouTube. Eto dia misy horonan-tsary, seho ary andian-tantara an'arivony maro lasa malaza isan'andro. Noho izany, azonao atao ny mankafy mijery azy ireo maimaim-poana ao amin'ny YouTube. Afaka misoratra anarana amin'ny Youtube Premium Discount ho an'ny mpianatra .
10. Antenna HDTV
Raha reraka amin'ny fahitalavitra tariby ianao ary maniry ny hanapaka azy dia mahatsapa ho tsara vintana ianao raha manana Antenna HDTV. Ity tranonkala ity dia manolotra serivisy mivantana mivantana amin'ny drafitra mora vidy. Na dia mety miovaova aza ny vidin'ny drafitra, azonao atao ny mankafy sary sy sarimihetsika misy kalitao HD eto.
Ka ny andrasanao dia ny fanapahana telegrama fotsiny ary mankafy horonan-tsary amin'ireo tranonkala ireo. Ankehitriny ianao dia manana safidy marobe mivezivezy izay misy dikany lehibe amin'ny seho an-tserasera amin'ny vidiny mora kokoa. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy mila miandry vao mody ianao satria afaka miditra amin'ireo tranokala ireo amin'ny findainao.
Sling TV vs TV YouTube
Fampiharana mozika tsara indrindra (Maimaimpoana sy karama) - Android sy iOS
Ahoana ny fomba hanovana Youtube amin'ny endrika Mp3?
fidirana hulu miaraka amin'i disney plus
mpilalao mozika an-tserasera maimaim-poana tsy voasakana any am-pianarana
roku tv netflix tsy mandeha
iza no anaran'ny sehatra ahafahanao mamorona tontolo sy lalao anao manokana
fandaharana amin'ny fotoana rehetra hampandeha ny apple tv
setroka ny fomba hahazoana famerenam-bola